यी गल्ती भुलेर पनि नगर्नुहोस जसले तपाईंकाे मष्तिस्कलाई असर गरिरहेकाे हुन्छ ! - eSuccess Quotes
5 months ago 4407 Views
Don't Miss it कतिकाे फाईदाजनक छन् त कालो दाग भएको केरा स्वास्थ्यका लागि ? पूरा पढ्नुहोस
Up Next २० भनाइहरु जसले तपाइलाई प्रेरणा दिनेछ
सुत्नेबेलामा लसुन चपाएर सुत्ने गर्नुस, यस्ता गज्जबको फाईदा हुनेछ !
बाथ रोग के हो ? यस्ता छन् बाथको उपचार बिधि
धेरैजसो जोर्नी दुख्ने रोगलाई बाथ भन्ने चलन छ । यो रोगको सहि उपचार नहुनाले मानिस पिडा सहेर बस्न बाध्य भएका…
छाती किन दुख्छ ? छाती दुख्ने समस्यामा प्रयोगहुने औषधि यस्ता छन्
छाती दुख्ने समस्या आजकाल हरेक दुईमा एकलाई हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई हेलचक्राई गर्दा ज्यान समेत जान सक्छ । अधिकांश…
उच्च रक्तचाप, मधुमेह रोग, बाथको रोग निदानका लागि तिते करेला !
आयुर्वेदिक चिकित्सामा तिते करेलालाई विभिन्न औषधिमा उपयोग गरिन्छ । विशेषगरी उच्च रक्तचाप, मधुमेह रोग, बाथको रोग अरू विभिन्न रोग निदानका…
मष्तिष्कको कार्यक्षमता बढाउन तोरीको तेल उपयोगी